Ahoana ny fampiasana cruise control - Victor Mochere
Ny fanaraha-maso ny sambo dia rafitra elektronika ahafahanao manamboatra ny accelerator fiara amin'ny hafainganam-pandeha manokana, mba hahafahanao manala ny tongotrao amin'ny pedal. Amin'ny ankapobeny dia endrika mitondra fiara amin'ny pilotra mandeha ho azy izany. Ny fanaraha-maso ny sambo dia natao hampiasaina amin'ny lalana A sy lalambe tsy misy fijanonana matetika sy fiodinana hifampiraharaha. Tamin'ny fiara lafo vidy avo lenta ihany no nahitana azy taloha, fa ankehitriny na dia ny fiara kely indrindra an-tanàn-dehibe aza dia efa nametraka azy io matetika.
Avitrika amin'ny alalan'ny fanindriana bokotra izany rehefa mitondra fiara ianao. Ny fanaraha-maso lehibe dia ny 'on/off', 'set', 'cancel' ary 'resume'. Noforonin'ny injeniera mekanika amerikanina jamba Ralph Teetor ny fanaraha-maso an-tsambo maoderina tamin'ny 1948, na dia efa tamin'ny taonjato faha-18 aza no niandohan'ny fanaraha-maso ny hafainganam-pandeha rehefa nampiasaina handrindrana ny motera etona.
Ahoana ny fametrahana fanaraha-maso cruise
Mitsitsy solika ve ny cruise control?
Rahoviana ianao no tsy tokony hampiasa cruise control?
Inona no atao hoe adaptive cruise control?
Ny fanaraha-maso dia tsy mitovy amin'ny maodely fiara tsirairay, fa ny ankamaroan'ny rafitra dia miasa amin'ny fomba mitovy. Araho ireto dingana 5 ireto hanombohana ny dia:
Amboary ny hafainganam-pandehanao - Ny fanaraha-maso dia natao ho an'ny fiara mandeha amin'ny hafainganam-pandeha tsy tapaka farafahakeliny 30 mph tsy misy fijanonana tsy tapaka, noho izany dia mety tsara ho an'ny làlambe na lalamby roa.
Ampidiro ny fanaraha-maso cruise – Rehefa tonga any amin'ny hafainganam-pandeha tianao ianao (azo antoka fa ao anatin'ny fetran'ny hafainganam-pandeha ilay izy), velomy ny rafitra fanaraha-maso ny sambo. Amin'ny ankamaroan'ny fiara, ny bokotra mifehy azy dia miseho eo amin'ny familiana na ao ambadiky ny familiana, ary hisy jiro hiseho eo amin'ny solaitrabenao rehefa mirehitra. Alohan'ny hampiasana sambany ny fanaraha-maso dia jereo ny bokinao ary tadiavo ireo bokotra mba tsy hikorontana amin'ny fitadiavana azy ireo eny an-dalana - izay tena mampidi-doza.
Apetraho ny fanaraha-maso ny sambo – Raha vantany vao navadikao ny rafitra dia tsindrio ny bokotra napetraka. Izany dia hifandray amin'ny fiaranao mba hitazonana ny hafainganam-pandeha ankehitriny. Amin'ny ankamaroan'ny fiara, izany dia hamadika ny famantarana ny dashboard ho maitso. Aorian'ny fametrahana ny fanaraha-maso dia azonao atao ny manala ny tongotrao amin'ny accelerator ary tokony hitazona ny hafainganam-pandehany ny fiara
Hanafainganana – Ny ankamaroan'ny fiara dia manana zana-tsipìka miakatra na bokotra '+' ahafahanao mampiakatra ny hafainganam-pandehan'ny fiara. Ny fanindriana ny pedalin'ny acceleratore dia manenika ny rafitra
Mampihena – Na tsindrio ny zana-tsipìka midina na ny bokotra '-' eo amin'ny rafitra fanaraha-maso cruise, na ampiharo ny frein. Noho ny antony ara-piarovana, dia ho tapaka ny fanaraha-maso an-tsambo raha vao ampiharina ny frein.
Asa hafa – Ny bokotra 'fanafoana' dia mampiato ny fanaraha-maso ny sambo, manome anao fifehezana feno indray raha tsy maty tanteraka ny rafitra. Tokony hitazona ny hafainganam-pandeha nofidinao handehanana. Raha te hiverina amin'ny hafainganana efa nomaninao teo aloha ianao dia tsindrio fotsiny ny 'resume'.
Ny asa voalohany amin'ny fanaraha-maso cruise dia ny mampiadana kokoa ny fiara, fa amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny hafainganam-pandeha sy ny fihenam-bidy dia afaka mitsitsy solika ihany koa ianao. Maro amintsika no miaiky fa tsy dia mifanaraka loatra amin'ny fitazonana ny hafainganam-pandeha tsy tapaka eny an-dalana, eny fa na dia amin'ny lalambe aza. Ny fanafainganana sy ny frein tsy tapaka dia hampiasa solika betsaka kokoa noho ny fitazonana ny hafainganam-pandeha napetraka.
Ny mitondra fiara amin'ny hafainganam-pandeha tsy tapaka 50 mph fa tsy 70 mph dia afaka manatsara ny toekarena solika amin'ny 25%. Fanampin'izany, ny fametrahana ny fanaraha-mason'ny dianao mankany amin'ny fetran'ny hafainganam-pandeha dia afaka manampy anao hisoroka onitra haingana. Mety hanampy indrindra amin'ny toetr'andro mitondra fiara amin'izao fotoana izao satria lasa mahazatra ny fakan-tsary amin'ny hafainganam-pandeha antonony.
Na dia manana tombony maro aza ny fanaraha-maso ny cruise, dia misy fotoana tsy azo antoka ny fampiasana azy. Avoid cruise control:
Amin'ny fifamoivoizana be, amin'ny lalana miolakolaka, midina ary rehefa manakaiky tetezana. Amin'ny ankapobeny, isaky ny tsy azo ampiharina ny hafainganam-pandeha tsy tapaka
Amin'ny lalana malama - misy lanezy, ranomandry, orana mivatravatra ary havandra - satria mampitombo ny mety hisian'ny fisitrihana izany
Amin'ny alina na rehefa mahatsiaro reraka. Tsy ho ela ny fanaraha-maso dia mety ho lasa fanaraha-maso snooze. Satria tsy voatery mitazona ny tongotrao eo amin'ny accelerator ianao dia mora kokoa ny miondrika - ary very ny fifehezana ny fiaranao
Ny sasany amin'ireo fiara ankehitriny dia manana adaptive cruise control (ACC). Adaptive cruise control dia teknôlôjia mandroso kokoa izay ahafahanao mametraka hafainganam-pandeha manokana raha mamaky ho azy ny fifamoivoizana eo aloha ny rafitra ary mitazona ny fiaranao amin'ny halavirana azo antoka. Manao izany amin'ny alàlan'ny fampiasana sensor radar napetraka eo anoloana ny fiara ianao mba hifanaraka amin'ny fiara eo aloha ny hafainganam-pandehanao.
Rehefa mahatsapa fiovana eo amin'ny halaviran'ny fiara eo aloha ny rafitra, dia hisondrotra ho azy na hanafaingana ny rafitra mba hitazonana ny hafainganam-pandehan'ny dia izay napetrakao teo aloha. Mahay sa ahoana? Raha mandeha tampoka anefa ny fiara eo aloha, dia tsy manaraka azy foana ny fiaranao. Fa kosa, ny rafitra ACC dia hitazona ny hafainganam-pandeha efa napetraka mandra-panovànao azy, na hahatratra fiara hafa.